ရုရှား-ယူကရိန်း ပဋိပက္ခ နောက်ဆုံးရသတင်းများ : ယူကရိန်းသမ္မတ နှင့် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ်တို့ စစ်လက်နက်ထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေး - Xinhua News Agency
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီဥပိုလ်မြို့၌ ပျက်စီးနေသောအဆောက်အဦတစ်လုံးရှေ့ ဖြတ်လျှောက်နေသော ဒေသခံတစ်ဦးကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အောက်ဖော်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များသည် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသည့် ရုရှား နှင့် ယူကရိန်းအကြား နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို စုစည်းဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။တူရကီနိုင်ငံသမ္မတရိဒ်တေရိအာဒိုဂန်က ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ ကုလသမဂ္ဂ၏ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ပါဝင်ထောက်ပံ့ကူညီရန် အသင့်ရှိကြောင်း ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ မာရီဥပိုလ်မြို့၌ စစ်ကားတစ်စီး ပျက်စီးနေသည်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၂ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
တူရကီသမ္မတအာဒိုဂန် နှင့် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်တို့သည် ရုရှားနှင့်ယူကရိန်းအကြား ပဋိပက္ခအတွင်း နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း တူရကီနိုင်ငံ၏ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တစ်စောင်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ၌ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂကဦးဆောင်သော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ် နှင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပုံစံအားလုံးဖြင့် ပါဝင်အားဖြည့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တူရကီနိုင်ငံက အသင့်ရှိကြောင်း တူရကီခေါင်းဆောင်က ဂူတာရက်စ်နှင့်ဆွေးနွေးစဉ် ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းဆွေးနွေးပွဲ ဂူတာရက်စ်က ၎င်း၏ မော်စကို နှင့် ကိဗ် ခရီးစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အာဒိုဂန်အားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံသမ္မတ ဇယ်လန်းစကီးက ၎င်းသည် ဗြိတိသျှဝန်ကြီးချုပ် ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူ ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက် စစ်လက်နက်များထောက်ပံ့ကူညီရေးဆိုင်ရာများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တို့သည် ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းရှိ မာရီဥပိုလ်မြို့ ဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရခြင်း နှင့် စစ်မြေပြင် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း ဇယ်လန်းစကီးက တွစ်တာတွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် လိုအပ်သော သံတမန်ရေးရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ဆွေးနွေးပွဲ၏ အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်က ယင်းနေ့အစောပိုင်းတွင် ၎င်းသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်နှင့်တယ်လီဖုန်းဆက်၍ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ပဋိပက္ခများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာပင် ယူကရိန်းနိုင်ငံသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာအတွက် အသုံးစရိတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံပေါင်းများစွာကို တောင်းခံထားကြောင်း ယူကရိန်းဝန်ကြီးချုပ် Denys Shmyhal က ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယူကရိန်းအစိုးရသည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအတွက် ယူကရိန်းငွေ hryvnias ၁၁၉ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံ) ခွဲတမ်းပေးအပ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း Shmyhal က တယ်လီဂရမ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။ “ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ တိုက်ခိုက်ရေးသမားတွေအတွက် အမြင့်ဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ဝန်ကြီးဌာနအတွက် ရရှိလာသော ဘက်ဂျက်ရန်ပုံငွေများကို ယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များအတွက် လစာငွေအဖြစ် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့အား အသုံးအဆောင်ကိရိယာ ၊ လောင်စာ ၊ အစားအစာ ၊ အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ နှင့် စစ်လက်နက်များ ဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးအပ်ရန်လည်းလုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း Shmyhal က ဆိုသည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက လာမည့် နိုဝင်ဘာတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ်ကျင်းပမည့် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ရန် ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာတီမာပူတင် နှင့် ယူကရိန်းနိုင်ငံ သမ္မတ ဇယ်လန်းစကီးတို့ နှစ်ဦးလုံးကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်း အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုက ဧပြီ ၂၉ ရက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
“ အင်ဒိုနီးရှားဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်မှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ အသင့်ရှိပါတယ်” ဟု အွန်လိုင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုတွင် ဝီဒိုဒိုက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဟာ G20 အဖွဲ့ကို စည်းလုံးညီညွတ်စေချင်ပါတယ်။ အဖွဲ့ကြီးကွဲသွားတာမျိုးကို မလိုလားပါဘူး ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးဟာ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အဓိက သော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
G20 သည် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နလန်ထူရာတွင် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေရန် အထောက်အကူအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ကြောင်း သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုက ပြောကြားခဲ့ပြီး ၎င်းသည် ယခုအပတ်အတွင်း ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံ သမ္မတ နှစ်ဦးလုံးဖြင့် တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒို နှင့် ရုရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်တို့သည် ဧပြီ ၂၈ ရက်က ဖုန်းဆက်ဆွေးနွေးမှုအတွင်း G20 လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ၏ ရှုထောင့်အမျိုးမျိုး နှင့် ရုရှား-အင်ဒိုနီးရှား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ထို့ပြင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုကို ဝီဒိုဒိုသည် ယူကရိန်းနိုင်ငံ သမ္မတ Volodymyr Zelensky နှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုအတွင်း ယူကရိန်းနိုင်ငံသမ္မတ၏ လက်နက်များထောက်ပံ့ရန် တောင်းဆိုချက်အား ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီများ ပေးအပ်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ (Xinhua)
Facts about Russia-Ukraine conflict: Ukrainian president, British PM discuss defensive support
BEIJING, May 1 (Xinhua) — The following are the latest developments regarding the conflict between Russia and Ukraine:
Turkish President Recep Tayyip Erdogan said Saturday that Turkey is ready to provide support for the United Nations (UN) humanitarian efforts in Ukraine.
Erdogan and UN Secretary-General Antonio Guterres discussed the latest developments in the crisis between Russia and Ukraine over phone, Turkey’s Directorate of Communications said inastatement.
The Turkish leader told Guterres that Turkey is ready to deliver all kinds of assistance to the UN-led work in Ukraine on humanitarian aid and evacuations.
According to the statement, Guterres briefed Erdogan about his latest visits to Moscow and Kiev.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said Saturday that he had discussed defensive support for Ukraine with British Prime Minister Boris Johnson.
The two sides talked about the situation on the battlefield and the blocked city of Mariupol in eastern Ukraine, Zelensky said on Twitter, adding necessary diplomatic efforts to achieve peace was another topic of the conversation.
Earlier in the day, the Ukrainian leader said he had discussed defense cooperation inaphone call with French President Emmanuel Macron.
Ukraine has appropriated billions of U.S. dollars to the defense ministry amid the ongoing conflict with Russia, Ukrainian Prime Minister Denys Shmyhal said Friday.
The Ukrainian government has allocated 119 billion hryvnias (about4billion dollars) for the ministry, Shmyhal said on Telegram. “We are trying to provide maximum support for our fighters.”
The funds will be used to pay salaries to Ukrainian troops, and supply them with equipment, fuel, food, protective devices and weapons, Shmyhal said.
Indonesia has invited both Russian President Vladimir Putin and Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the Group of 20 (G20) summit in November, Indonesian President Joko Widodo said Friday.
“Indonesia is ready to contribute to the peace effort,” Widodo said inavirtual press conference. “Indonesia wants to unite the G20. Do not let there beasplit. Peace and stability are the keys to the world economic development.”
The G20, he said, playsacatalyst role in the recovery of the world economy, adding that he had telephone conversations with both leaders of Russia and Ukraine this week.
On Thursday, Widodo and Putin discussed issues of Russian-Indonesian cooperation and various aspects of the activities of G20 inaphone conversation.
Inaconversation with Zelensky on Wednesday, Widodo turned downarequest for arms from the Ukrainian president, saying that Indonesia is ready to provide humanitarian assistance. ■
Photo 1 A local resident walks pastadamaged building in the port city of Mariupol, April 28, 2022. (Photo by Victor/Xinhua)
Photo2An armored vehicle is seen nearadamaged building in the port city of Mariupol, April 22, 2022. (Photo by Victor/Xinhua)